Wasiirka Amniga oo kormeeray Hotel M. Almukarama – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Wasiirka Amniga oo kormeeray Hotel M. Almukarama
A warsame 29 March 2015 29 March 2015
Mareeg.com: Wasiirka Amniga gudaha ee xukuunadda Soomaaliya iyo taliyaha hay’adda Nabadsugidda iyo sirdoonka Soomaaliya ayaa maanta howlo kormeer ah ku tegay hotelka Maka Al-mukarama ee Muqdisho oo Jimcihii ay weerar ku soo qaadeen Al-Shabaab, halkaasi oo ay warbixinno uga dhageysteen saraakiisha hay’adaha amniga.
Sidoo kale, xubno ka socday ururrada bulshada rayidka ayaa gaaray Hoteelka, waxaana ay si wada jir ah uga warbixiyeen Wasiirka iyo xubnihii kale dhibaatada ka dhacday hotelka, sida looga hortagi karo iyo waxa ay ka qabto diinta Islaamka in dad shacab ah la gumaado.
Sheekh Nuur Baaruud Gurxan ayaa ka sheekeeyay waxa ay ka qabto diinta Islaamka in la dhibaateeyo dad shacab ah oo aan waxba galabsan, isagoo ugu baaqay dhallinyarada Al-shabaab u dagaallama in ay ilaah ugu towba keenaan dambiga ay ka galayaan shacabka Soomaaliyeed ee Muslimka ah.
“Ficilkan ay sameynayaan shareecada ilaahay boos kuma lahan, sida aad isu gubaysaan ayaa aakhirina Naarta la idinku shubi doonaa, waayo waxa aad dilaysaan waa dad Muslimiin ah, Soomaaliya goormeey gaalowday?” ayuu yiri Sheekh Nuur.
Wasiirka amniga gudaha ee xukuumadda Soomaaliya, Cabdirisaaq Cumar Maxamed ayaa sheegay in hay’adaha amniga ay ka go’antahay sidi loo soo afjari lahaa dagaalada iyo weerarada Al-shabaab, isagoo intaa ku daray in Wasaaraddu ay gacan ka geysan doonto sidii milkiilayaasha hoteleeda looga caawin lahaa sugidda ammaanka.
“Dadka la marin habaabiyay oo caqli yar uu ku dambeeyo in ay iska soo noqdaan iskana daayaan waxyaabaha ay gacanta kula jiraan anagana waan soo dhaweynaynaa, waayo waa dadkeenii la marin habaabiyay” waxaa sidaa yiri Wasiirka Amniga gudaha.
C/rasaaq Cumar Maxamed Wasiirka Amniga gudaha ayaa amaanay laamaha amniga ee dalka dadaalada lagu xaqiijinaayo amaanka magaalada Muqdisho iyo guud ahaan dalka.
Alshabaab ayaa galabtii jimcaha ilaa shalay suba oo sabti aheyd ka dagaallamayey gudaha hotel Maka Almukarrama, waxaana halkaas ku dhntay dad ku dhow labaatan.
Faroole: Dowladda FS ayaa dayacday danjire Bari-bari
Carabta oo isku raacay dhismaha ciidamo mideysan